छात्रालाई बसले ठक्कर दिएपछि चाबहिलमा तनाव, गाडीमा आगजनी र तोडफोड - Nepali Taja Khabar
December 23, 2019 by Auther
काठमाडौं, ७ पुष । सुकेधारा नजिकै एक यात्रुबाहक बसले एकजना क्याम्पस जान लागेकी छात्रालाइ ठक्कर दिँदा उनी घाइते भएकी छिन् । घटनापछि आक्रोशित विद्यार्थीहरूकाे भीडले ठक्कर दिने बसकाे सट्टा अन्य गाडी चाबहिलमा जलाइदिएका छन् ।
Prevहनुमानलाई सिन्दुर अर्पण गर्दा सबै कष्ट नास
Nextगुन्द्रूकको मोलमा गोकर्ण रिर्सोट भाडामा, भ्रष्ट्राचारीको नाइके नै ओली ?
महाबिर पुनलाई सहयोग गर्न इशा गुरुङले सुरु गरिन् अभियान, सक्नेले सहयोग गरौ नसक्नेले सेयर गरौ
यिनी हुन् ४३ वर्षीया महिला मेकानिक सरस्वती ! भन्छिन्, ‘सकुन्जेल मोटरसाइकल नै बनाउँछु’ (भिडियो सहित)
एक दिन’मै बन्छ यति राम्रो घर-गोठ ! पत्या’उनु भएन ? भिडियो हेरेपछि नपत्या’एर सुखै हुन्न अवश्य हेर्नुहोस्